Ka caawi dadka inay dalbadaan lacag-siintooda kicinta - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Ka caawi dadka inay dalbadaan lacag-siintooda kicinta
Ka caawi dadka inay dalbadaan lacag-siintooda kicinta
Dadka guri la’aanta ah ama kumeelgaarka ah waxaa laga yaabaa inaysan ogeyn inay uqalmayaan $ 1,200 Lacagta Saamaynta Dhaqaalaha (EIP) - sidoo kale loo yaqaan “jeegaga kicinta” - oo soo baxday gugii hore. Waxa kale oo laga yaabaa inay helaan $ 500 oo dheeraad ah oo loogu talagalay cunug kasta oo u qalma, umana baahna wax dakhli ah sheegashada lacag bixinta. Taasi waa sababta FTC ay ula shaqeyneyso IRS si loo gaarsiiyo ereyga ku saabsan sida dadku wali u ururin karaan lacagtooda, waxaana u baahanahay kaalmadaada.
Haddii aad taqaanid qof kasta oo aan lahayn cinwaan rasmi ah (ama qof aan ka warqabin inay u qalmi karaan lacag bixin), waa kuwan waxa ay u baahan yihiin inay ogaadaan:
Waqtiga kama dambaysta ah ee lagu galayo sheegashada lacag-bixinta waa Nofeembar 21, 2020.
Si aad isu qorto, dadku waxay u baahan yihiin:
Magacooda oo lagu daray cinwaanka boostada iyo cinwaanka emaylka. (Dadku waxay weydiisan karaan saaxiibkood, xubin qoyska ah, ama hoyga inay isticmaalaan cinwaankooda.)
Taariikhda dhalashada iyo lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti ee sax ah (SSN)
Macluumaadka koontada bangiga, haddii ay jiraan
PIN Aqoonsiga Aqoonsiga, haddii ay mid ka heleen IRS
Shatiga ama Aqoonsiga gobolka, haddii ay jiraan
Magaca, SSN, iyo xiriirka cunug walba u qalma
Dadka aan sida caadiga ah xareynin canshuuraha dakhliga ayaa wali xaq u yeelan kara lacag bixin. Kuwa dakhligoodu ka hooseeyo $ 12,200 ($ 24,400 ee lamaanayaasha is qaba) ayaa heli kara tilmaamo ku saabsan sida loo isticmaalo IRS's qalab aan filers, ka dibna ku xeree dalab at IRS.gov/nonfilereip.
Dadka qaata howlgabnimada ama howlgabka tareenka, Dakhliga Sooshiyaal Sikiyuuriti (SSI) ama macaashka Lambarka Bulshada ayaa wali uqalma lacag bixintaan.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in IRS oo keliya ay dirto lacag-bixintan, laakiin ma wici doonaan, ma soo diri doonaan, ama email uma soo diri doonaan dadka wixii ku saabsan lacag-bixintooda. Iyaguna lacag kama qaadi doonaan. Qof kasta oo soo waca, qoraalo, ama emayl soo diro si loo dedejiyo Bixinta Saameynta Dhaqaalaha waa khiyaano. Dadku waligood yaanay qofna lacag siin si ay lacag ugu helaan: qof kasta oo kuu sheega inaad lacag bixiso waa khiyaano.
Booqo IRS.gov/coronavirus wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan lacagaha kicinta dhaqaalaha. Goobta waxaa ku jira a xirmo loogu talagalay wada-hawlgalayaasha si aad farriimahan ugu gaarsiiso shabakaddaada. Sidoo kale, booqo ftc.gov/coronavirus si aad u hesho macluumaad ku saabsan ka fogaanshaha lacag-bixinta Coronavirus iyo khiyaanada wax soo saarka iyo sida loo u sheeg FTC.
← Ka ganacsiga dadka - Oktoobar 2020 $ 9.4 milyan oo la siiyay 421 urur oo ka shaqeeya horumarinta dhalinyarada guud ahaan gobolka Washington →